Famaritana ara-teknika lehibe momba ny HDPE High efficiency
Famaritana ara-teknika lehibe an'ny HDPE High effetency Screw Extruder
Ampiasaina betsaka amin'ny sehatry ny famatsian-drano sy famatsian-tsolika. Ny fizarana famahanana dia rafitra misy alaina miaraka amin'ny mpanara-maso ny mari-pana, ary mora
hahazoana fahazoana avo sy extrusion azo antoka. Miaraka amin'ny firafitry ny visy BM efa mandroso, dia afaka mizara ny fitaovana HDPE amin'ny mafy ka hatramin'ny ranoka.
Amin'ny alàlan'ny fampiasana ny volavolan-tsoloka sakana karazana vaovao, ity extruder ity dia manana fatran'ny extrusion avo lenta amin'ny RPM avo miaraka amin'ny fanjifana angovo ambany, ary ity extruder ity dia afaka mahazo vokatra mifangaro tsara amin'ny hafanana ambany, ary ity extruder ity dia afaka mifehy ny fanetezana fitaovana hahazoana ny mety tsara ary miempo aza ny mari-pana, ka azo sorohina ny mariky ny riandrano amin'ny rindrina anatiny amin'ny fantsom-by lehibe.
Seranana matevina mifono vainga matevina
Petrochemical Powder Pelletizing sy Powder Modification
XPE, IXPE Tsipika fanararaotana takelaka
Bimetallika visy sy barika